सिक्किम पुग्यो ‘कबड्डी’ बिवाद, प्रदर्शन रोक्न माग, हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी नलिने ! - Mitho Khabar
सिक्किम पुग्यो ‘कबड्डी’ बिवाद, प्रदर्शन रोक्न माग, हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी नलिने !
June 6, 2022 mithokhabarLeaveaComment on सिक्किम पुग्यो ‘कबड्डी’ बिवाद, प्रदर्शन रोक्न माग, हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी नलिने !
नेपाली चलचित्र ‘कबड्डी ४’की नायिका मिरुना मगर र फूर्वा लामाबीचको विवाद साम्य हुनुको सट्टा झन चर्किएको छ। गत जेठ १५ गते काठमाडौंको सिभिल मलमा चलचित्रको प्रतिकृया लिने क्रममा लामाले आफूलाई ‘ब्याड टच’ गरेको भन्दै मिरुनाले झापड हानेकी थिइन। दुई दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका लामा धरौटीमा छुटेपछि मिरुनासँग कागजी रुपमा माफी मागेका थिए।
तर यो विवाद माफी मागे पनि सेलाउन भने सकेन। एकातिर मिरुनालाई गाली गर्ने क्रम रोकिएको छैन। अर्कोतिर लामालाई पनि सामाजिक संजालमा अनेक प्रतिकृया आइरहेका छन्। लामाले माफी मागेको पर्सी पल्ट आफ्नो बोली फेरेका छन्। उनले मिरुनाले रोएका कारण आफूले गल्ती नगरे पनि माफी मागेको बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच यो चलचित्र निर्माण टिमले सिक्किम रिलिजको तयारी गरेको थियो। तर यो फिल्म सिक्किममा रिलिज भएको खण्डमा सडक आन्दोलन गर्ने बौद्ध धर्मगुरुले चेतावनी दिएका छन्। सिक्किमका बौद्ध धर्मगुरु ओङ्दी पिन्त्सोले गान्तोकमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मको सिक्किम प्रदर्शन रोक्न माग गरेका हुन्।
नेपालमा लामा माथि फिल्मकी नायिकाले अन्याय गरेकाले सिक्किममा यो फिल्म प्रदर्शन गरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यस्तै पिन्त्सोले फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राईले भिक्षुको भूमिका निर्वाह गरेको विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘यदि फिल्म हलमा रिलिज भएको खण्डमा लामाहरु सडकमा उत्रिनेछन् र हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छैनौं।’
उनले फूर्वा माथि अन्याय भएको भन्दै उक्त घटनाले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुमाथि अन्याय भएको बताए। नेपालको घटना भएकाले फिल्मको सिक्किम रिलिज नरोक्न आग्रह आएको भएपनि लामा भएको नाताले आफूले फूर्वा माथिको अन्याय महसुस गरेको उनको भनाई छ।
मिरुनाले फूर्वासँग माफी नमागेसम्म फिल्म चल्न नदिने पिन्त्सोको भनाई छ। राम्रो मुखले भन्दा नमानी फिल्म रिलिज गरेको खण्डमा तोडफोड हुने उनले चेतावनी दिए।
सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !
कति पाउँछन् तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृ’त्यु भएकाको परिवारले बीमा रकम ?
टिपरले ठक्कर दिँदा आमा छोराको मृत्यु, एक प्रहरी र ३ प्रदर्शनकारी घाइते
March 17, 2020 mithokhabar
May 22, 2022 mithokhabar
किन अर्काकी श्रीमती ताक्छन त पुरुषहरु
जेल गइन् ‘हनि ट्रयाप’ जालोमा युवक फसाउने भावना
मेष राशिलाई व्यापार, कर्कटलाई जागिर शुभ, कुन राशिले कुन काम गर्दा हुन्छ फलिफाप ?
के हो बाथ राेग, कसरी चिन्ने बाथ राेगलाई, जान्नै पर्ने यी कुराहरु (भिडियाे सहित)
युवतीको कामुक अनुहारमा फसे फूर्वा, झुक्याएर चौथो श्रीमान् बनाए (भिडियोसहित)
काठमाडौँमा एकाबिहानै भयो भयानक दुर्घटना, कोटेश्वरमा हायसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्री देवकुमारको गयो ज्यान
४ घण्टासम्म साल नखसेपछि जाजरकोटकी ३० वर्षीया नारायणकलीले गुमाइन ज्यान, चौथो सन्तान रुपमा दिएकी थिइन छोरालाई जन्म
रौँ भएको काखी देखाएर मात्रै यी मोडलले कमाइन् साढे चार करोड
मलेसियाले ५० हजार नेपाली सुरक्षागार्ड लैजाने, तोक्यो नयाँ तलब..
अब नेपालमा ठूलो भूकम्प आउने खतरा
मुम्बईमा नेपाली मोडललाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने अखडा, एक रात कै १ लाख रेट
सुरु सुरु कति गाह्रो हुन्छ त्यस पछि स्वोर्ग मै पुगे जस्तो हुन्छ हामी केटी लाई मात्र होकी केटा लाइनी हुन्छ यस्तो ?
कोटेश्वरमा हायसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृ’त्यु
यस्तो स्थानमा बिर्सिएर पनि नराख्नुहोस् कुचो, सँधै हुनेछ पैसाको कमी
बहिनीले भोक लागो भन्दा दाजुले सकिनसकी पानी तताएर चिया भन्दै दिँदा रहेछन् (भिडियो सहित)
३८ श्रीमती, ८९ छोराछोरी भएका दुनियाँको सबै भन्दा ठूलो परिवारका मुखियाको मृत्यु
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन : हेर्नुहोस् असार १४ गते मंगलबारको राशिफल